Loza nahafatesana olona 47 tany Anjozorobe : nohidin’ilay saofera avy any ivelany ny labasin’ilay kamiao | NewsMada
Loza nahafatesana olona 47 tany Anjozorobe : nohidin’ilay saofera avy any ivelany ny labasin’ilay kamiao
Ankoatra ny hoe fisotroana sy fandehanana mafy, fantatra fa hoe nohidin’ilay saofera avy any ivelany ny labasy nanarona ilay kamiao, noho ny tahotra ny mpitandro filaminana. Antony nahabetsaka ireo namoy ny ainy tamin’ilay loza nahatsiravina nahafatesana olona 47 tany Anjozorobe, ny faran’ny herinandro teo iny.
Mivoaka tsikelikely ny vaovao momba ny anton’ny nahatonga ny loza nahafatesana olona maro tany Anjozorobe ny asabotsy teo iny. Araka ny fijoroana vavolombelona nataon’ny fianakavian’ny niharam-boina sy ireo olona avotra soa aman-tsara tamin’iny loza iny, nitoroka ny mpamily ho tompon’antoka tamin’izy io ry zareo. “Mamo toaka gasy, tsy natory nandritra ny alina io mpamily io. Efa notenenina mafy izy talohan’izao, ary efa nisy olona nidina am-pandehanana teo Anjozorobe noho ny tahotra ny hiharan-doza”, hoy ny fitantaran’Atoa H.M.
Mbola nanamafy koa ireto olona nitantara ireto fa tokony ho vitsy ihany ny maty tamin’iny loza iny, raha tsy nohidin’ilay saofera tao anaty labasy ireo mpandeha rehetra. “Noho ny filazan’ilay mpamily fa misy zandary manakana ao aloha ao, nohidiny tao anaty labasy tao aoriana avokoa ny mpandeha rehetra. Rehefa latsaka tanaty rano ilay kamiao, tsy nisy tafavoaka ireo olona taoriana. Ireo fokonolona namonjy no nanataka ilay labasy tamin’ny antsy nahafahana namoaka ireo tra-boina tao anaty kamiao. “Vokatr’io no nahamaro ireo olona maty tao anaty kamiao. Ny fokonolona teny an-toerana no niray hina nanavotra ireo tra-doza ireo”, hoy ny fanazavana ihany.
Araka izany, efa nahalala tsara ilay mpamily io fa mandika lalàna amin’ny fitondrana ireo olona marobe tanaty kamiao, ka hevitra hitany ny hanidy ireo mpandeha tao aoriana, kanjo loza no naterany. Nihevitra ny hamitaka zandary kanefa vao mainka namono olona. Ankoatra izay, mamo toaka, tsy ampy torimaso ary nandeha mafy izy io nandritra izany rehetra izany, ka tsy nahafehy ny familiana intsony.
Nokasain’ny olona hatao fitsaram-bahoaka
Araka ny fijoroana vavolombelona nataon’ireto olona tafaresaka taminay ireto ihany, efa nokaisan’ny sasany hanaovana fitsaram-bahoaka ilay mpamily. “Maro tamin’ireo olona teny an-toerana no tezitra sy nisafoaka ary nikasa hanao fitsaram-bahoaka ilay mpamily io. Saingy nafenin’ny zandary izy io ary nalefa haingana niala tany an-toerana”, hoy ny fitantarana. Tsy anisan’ny namoy ny ainy tokoa ilay mpamily fa naratra, ary voalaza fa ny lohany no voadona. Tao anatin’ireo nalefa notsaboina taty an-dRenivohitra izy fa tsy mba tany amin’ny CSB II Anjozorobe.
Raha ny vaovao farany, mbola anaty fitsaboana izy io, ary nahenoana fofon-toaka tokoa. Miandry ny fanadihadiana atao aminy ny zandary. Raha araka ny lalàna, tsy afaka amin’ity zava-niseho ity ilay mpamily. Tompon’antoka tanteraka amin’ny fahafatesan’ny olona rehetra izy, ary voasokajy ho famonoana niniana natao ny mety ho fiampangana azy. Fantatra fa hametraka fitoriana ny havan’ny niharan-doza tamin’ity loza mahatsiravina ity.
Fantatra ihany koa fa hita ny alahady teo ny razan’ilay tovovavy vao nampakarina. Efa eo am-pelatanan’ny fianakaviany avokoa ireo razana rehetra tamin’iny loza iny.